मनोरञ्जन Archives - Page2of 10 - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com मनोरञ्जन Archives - Page2of 10 - खबर प्रवाह
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत अब हामीबीच रहेनन् यो खबर जतिले सुने सबै चकित परे ।भारतीय टिभी सिरियल्समा आफ्नो अभिनयको जादु देखाएपछि फिल्ममार्फत् मानिसहरुको मनमा घर बनाएका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत शरीर आइतबार उनको घरमा भेटियो । मुम्बईको बान्द्रा इलाकामा उनी भाडाको फ्ल्याटमा बस्दथे, त्यहि फ्ल्याटबाट उनको मृत शरीर बाहिर निकालियो । प्रहरीका अनुसार […]
चर्चित कन्नड अभिनेता चिरञ्जिवीको ३९ वर्षमा हृदयघातका कारण निधन
कन्नड फिल्मका चर्चित अभिनेता चिरञ्जिवी सरजाको आइतबार दिउँसो हृदयघातका कारण बेंगलुरुको एक नीजि अस्पतालमा निधन भएको छ । उनी ३९ वर्षका थिए । खबरका अनुसार उनको कोभिड–१९ परीक्षण पनि गरिएको छ जसको रिपोर्ट हाल प्राप्त भएको छैन । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार दिउँसो करिब १ बजे उनी फोनमा आफ्ना पितासँग कुरा गरिरहेका थिए, त्यति नै […]
काठमाडौं । अभिनेत्री मनिषा कोइराला र उनको परिवारको कोरोना टेस्ट गरिएको छ । भारतको मुम्बइबाट काठमाडौं आएपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकी मनिषा र उनको परिवारको कोरोना परिक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । अस्पतालले मनिषा र उनको परिवार सबैमा कोरोना नेगेटिभ आएको जनाएको हो । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री मनिषाले हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साको […]
बलिउडका चर्चित संगीतकर्मी वाजिद खानको आइतबार अबेर राती निधन भएको छ । चर्चित गायक सोनु निगमले उनको मृत्यु ट्वीटरमार्फत् पुष्टि गर्दै लेखे, ‘मेरो भाइ वाजिदले हामीलाई छोडेर गए । संगीतकर्मी सलिम मर्चेन्टले भारतीय सञ्चारमाध्यम पीटिआईलाई भने, ‘उनलाई थुप्रै समस्या थियो । उनको मृगौलामा समस्या थियो र केही समय अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । तर […]
मुम्बई । अभिनयको माध्यमबाट सबैको मन जित्न सफल अभिनेत्री कंगना रनौतले आफ्नो प्रोडक्स हाउस खोलेकी छन् । उनले हालै मुम्बईको पाली हिलमा एक प्रोडक्सन अफिस खोलेकी हुन् । जसबाट उनले फिल्म समेत निर्माण गर्ने भएकी छन् । प्रोडक्स हाउस उनले अफिस कम र स्टुडियो बढी बनाएकी छन् । भर्सटाइल अभिनेत्रीको रुपमा परिचित कंगनाले आफ्नो निर्देशन […]
विश्व प्रसिद्ध गायन प्रतिभाको खोज रियालिटी शो अमेरिकन आइडलको उपाधि यात्रामा नेपाली मूलका दिवेश पोखरेल अगाडि बढ्नुभएको छ । आइडलको १८ औँ संस्करणको उपाधि यात्रामा अघि बढ्ने क्रममा दिवेश उत्कृष्ट सातभित्र पर्न सफल हुनुभएको छ । उत्कृष्ट ११ प्रतिस्पर्धीबीचमा मतका आधारमा आइतबार सर्वाधिक मत ल्याउने उत्कृष्ट सातको छनोट गरिएको हो । अमेरिकाको कन्सास राज्यको विचिटा […]
अमेरिकी आइडलको टप १० मा पुगे नेपाली दिवेश
काठमाडौं। अमेरिकाको प्रख्यात गायन रियालिटी सो अमेरिकन आइडलमा नेपालका युवा दिवेश पोखरेलले टप १० मा स्थान बनाएका छन् । उनले पछिल्लोपटक जोन डेनभरको चर्चित गीत ‘कन्ट्री रोड’ गाउँदै टप १०मा स्थान सुरक्षित गरेका हुन् । अमेरिकन आइडलमा आफूलाई ‘अर्थर गन’ नामले चिनाएका दिवेशलाई टप ५ को दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । अडिसन राउन्डदेखि नै अब्बल […]
प्रख्यात बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरको निधन
बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरको निधन भएको छ। अभिनेता अमिताभ बच्चनले ट्वीटरमार्फत उनको निधन भएको जानकारी दिएका छन्। हिजो मात्रै उनलाई स्वास फेर्न अप्ठ्यारो भएपछि ६७ वर्षे ऋषिलाई बुधबार मुम्बईको रिलायन्स फाउण्डेस अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। दुई वर्ष अगाडि सन् २०१८ क्यान्सर भएको पुष्टि भएपछि एक वर्ष भन्दा बढी समय अमेरिका बसेर उपचार गरेका थिए। उनी […]
बलिउड प्रख्यात अभिनेता इरफानको निधन
एजेन्सी, १७ वैशाख । चर्चित बलिउड अभिनेता इरफान खानको निधन भएको छ । मंगलबार उनको स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रिएका कारण उनलाई मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । उपचारकै क्रममा बुधबार ५४ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको भारतीय समाचार एजेन्सीहरूले जनाइएका छन् । ‘आज तक’का अनुसार इरफान खानले मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा ५४ वर्षको उमेरमा […]
बलिउड अभिनेता इरफानको अवस्था गम्भीर, आइसियूमा सारियो
एजेन्सी– बलिउड अभिनेता इरफान खानको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेको छ । अब उनलाई मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालको आइसियूमा भर्ना गरिएको छ । उनको स्वास्थ्यमा के समस्या भएको हो र उनलाई किन आइसियूमा राखिएको हो भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । अस्पतालले उनको अवस्था बिग्रिएको मात्र भनिरहेको छ । अनि उनलाई आइसियूमा राखिएको बताएको छ । तर, […]
एजेन्सी : बलिउड फिल्म निर्देशक करण जोहरको फिल्म ‘तख्त’ विवादमा तानिएको छ । फिल्मको पटकथा लेखक हुसेन हेदरीले हिन्दुहरुको विरुद्धमा ट्विट गरेपछि उक्त फिल्म विवादमा तानिएको हो । उक्त ट्विट पछि फिल्म र फिल्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको आलोचना भइरहेको छ । र भने दर्शकहरुले फिल्मलाई बहिष्कार गर्ने बताएका छन् । जुम टिभि डट कमको एक रिपोर्टका […]
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ ले बम्पर ओपनिङ गरेको छ ।चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ ले पहिलो दिनमा नै देशभरिका अधिकांश हलमा हाउसफुलको ब्यापार गरेको छ ।चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ले पहिलो दिन निया १ करोड १२ लाखको कलेक्सन गरेका छ ।चलचित्रले काठमाडौं ५९ लाख र मोफसलमा ५३ कलेक्सन गरेको चलचित्र निर्माण युनिटले जानकारी दिएको छ। काठमाडौं […]
काठमाडौं। गायिका स्मिता दाहाल र गायक सरोज ओलीको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ‘कमेरोले पोतेको दुई तलाको घर’ सार्वजनिक भएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको गीतमा स्वर दिने स्मिता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी नातिनी हुन् । गीतलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले लेखेका छन् । गीतमा कार्टुन क्रुका कलाकार सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्मा तथा चर्चित […]
फागुन १५ मा विवाह गर्दै प्रियंका र आयुष्मान
काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराजजोशीको विवाह यही फागुनको १५ गते हुने पक्का भएको छ । प्रियंकाले इन्स्टाग्राममा तस्वीर पोस्ट गर्दै मिति सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनीहरु यति बेला विवाहको तयारीमा व्यस्त रहेको बताइएको छ। केही बर्षदेखि आयुष्मान र प्रियंका प्रेम सम्बन्धमा छन् । केही दिन अगाडि प्रियंका नजिकका साथीहरूसँग ब्याचलर पार्टी […]
काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा माया, प्रेम र बिछोड देखाइएको छ । चलचित्रमा नायिका पूजा शर्मा र नायक पल शाह मुख्य भूमिका रहेका छन् । सुदर्शन थापा प्रोडक्सनले निर्माण गरेको चलचित्र यसवर्षको प्रतिक्षित चलचित्र हो । यस चलचित्रमा पूजा र पलको अलवा हरिहर शर्मा, […]
रणबीर आलियाको विहे १८ डिसेम्बरमा, मुम्बईमा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता रणबीर कपुर र आलिया भट्टको विवाहको चर्चा लामो समय देखि हुँदै आएको छ । अब यी दुवैको विवाहको मिति नै सार्वजनिक भएको छ । नवभारतटाइम्सडटकमका अनुसार यी दुईको विवाह १८ डिसेम्बर २०२० मा हुँदै छ । उनीहरुले विवाह मुम्बईमा नै गर्ने यो भारतीय पत्रिकाको दाबी छ । विवाहका लागि मुम्बईको ५ […]
गैँडाकोट महोत्सवमा उही खोलीमा माछा !
नवलपुर । गैँडाकोट नारायणी नदी किनारमा सञ्चालन भएको तेस्रो गैँडाकोट महोत्सव २०७६ मा आस्था राउत र राजन गुरुङको गीतमा दर्शकहरु छमछमी नाचेका छन् । राजन गुरुङ स्टेजमा चढेर महोत्सवमा साङ्गीतिक माहौल तताएका थिए । गुरुङले बजारमा ल्याउने तयारी गरेको सालैजो भाको गीतसँगै उही खोलामा पानी उही खोलीमा माछा, आकाशै माथीलगायतका गीत गाएका थिए । गुरुङपछि […]
गैँडाकोट महोत्सवः दर्शकलाई पशुपतिको साथ
नवलपुर । गैँडाकोट नारायणी नदीकिनारमा सञ्चालन भएको तेस्रो गैँडाकोट महोत्सव २०७६ मा पशुपति शर्माले दर्शकलाई छमछमी नचाएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ गैँडाकोट नवलपुरको आयोजनामा जारी महोत्सवको छैठौँ दिन सोमबार शर्माले दर्शकहरुलाई आफ्ना चर्चित गीतमार्फत मनोरञ्जन प्रदान गरेका हुन् । शर्माले मेरो माया बसेको ठाउँमा, मलाई जापान पनि यही, आमालाई कोसेली कान्छी बुहारी लगायतका ६ […]
पाँचौ बिहेको १२ दिनमा नै किन डिभोर्स गरिन् यी अभिनेत्रीले ?
हलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन्, पामेला एन्डरसन । उनले यही वर्ष २० जनवरीमा प्रोड्युसरसमेत रहेका जोन पिटर्ससँग विवाह गरेकी थिइन् । त्यसो त यो विवाहलाई बाहिर खासै ल्याइएको थिएन । पारिवारिक व्यक्तिहरुमात्र बोलाएर गरिएको यो पामेलाको पाँचौ विवाह थियो । तर, अचम्मको कुरा के भने विवाह गरेको १२ दिनमा नै पामेलाले डिभोर्स गरिन् । द हलिउड […]
धुर्मुसको चलचित्र अमेरिकी कम्पनीले किन्यो, मुनाफाको ५० प्रतिशत रंगशालालाई
चितवन। चितवनमा जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियानका लागि बनेको चलचित्र सेन्टी भाइरस अमेरिकाको कम्पनीले खरिद गरेको छ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार सुबिहानी फिल्मस्को व्यानरमा बनेको चलचित्रलाई अमेरिकाको नेप्सिने कम्पनीले खरिद गरेको हो । सेन्टी भाइरसको इन्टरनेसनल राइट्स नेपाली मूल्य एक करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । […]